Xilliga uu dib u bilaabanayo Jaadka Kenya laga keeni jiray oo la shaaciyay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xilliga uu dib u bilaabanayo Jaadka Kenya laga keeni jiray oo la...
Xilliga uu dib u bilaabanayo Jaadka Kenya laga keeni jiray oo la shaaciyay
Maalinta berito ah ayaa la filayaa in ay dib u bilaawdaan duulmaadyada diyaaradaha jaadka ka keeni jiray Kenya ee imaan jiray Soomaaliya, kuwaas oo horay loo joojiyay sababo la xiriira Cudurka Coronavirus oo kiisas kamid ah laga helay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Guddoomiyaha Ganacsatada Qaadka Kenya ayaa sheegay in labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ka gaareen keenista qaadka,isla markaana ay dowladda Soomaaliya fasaxday,balse shuruud lagu xiray.
Waxaa uu sheegay in shuruudaha ay Dowladda Soomaaliya ku xirtay ay kamid yihiin kordhinta canshuurta laga qaado qaadka Soomaliya ay Kenya kento , lagana dhigo 1-kg ($-3.5) halkii markii hore ay ka aheyd ($-1) iyo in sidoo kale dadka qaadka iibiya ay kala fogaadaan 2 mitir, xirtaana gacmo gashi iyo weji xir si looga hortago xanuunka COVID-19.
War kaan kasoo baxay Ganacsatada ( jaadka ) Kenya ayaa weli Dowladda Soomaaliya weli aysan ka hadlin,hayeeshee Warar la helay ay sheegayaan in Golaha Wasiirada Soomaaliya ee xilka siihaya ay shalay ogolaadeen.
Qaadka (jaadka) ay kenya keento dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka Ganacsada Soomaali farabadan, kuwaas oo ku maareeya Nolosha qoyskooda,waxaana duulimaadyadii Caalamiga ahaa ee la joojiyay uu dadkaasi ku yeeshay saameyn ballaaran.
Maqaal horeWafdi ka socda Dowladda oo gaaray degmo tirsan Gobolka Gedo
Maqaal XigaMaamulka Gobolka Shabeelada Hoose oo Gar-gaar gaarsiiyey deegaanada uu ku fatahay wabiga Shabelle